Bụrụ enyi nke Bromley, Lewisham & Greenwich Mind - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Kwado Anyị > Bụrụ enyi nke Bromley, Lewisham na Greenwich Mind
Bụrụ enyi nke Bromley, Lewisham na Greenwich Mind
Ọ ga-amasị gị itinye aka na ọrụ ebere ahụike uche na mgbakasị mpaghara gị?
BLG Mind na-akwado ihe karịrị mmadụ 7,000 kwa afọ na Bromley, Lewisham na Greenwich, anyị na-achọkwa ndị mmadụ ka ha bụrụ enyi anyị!
Kedu ihe ịbụ enyi pụtara na gịnị kpatara m ga-eme ya?
Ọ bụ kpam kpam free!
A ga-enwe ohere maka ịkwado anyị dịka ọrụ ebere.
Ị ga-enwe ike inye aka ịkpụzi ọrụ anyị na-arụ na BLG Mind site na itinye aka na mmepe atụmatụ.
Ị ga-enweta akwụkwọ ịkpọ òkù maka mmemme BLG Mind, gụnyere mmemme anyị kwa afọ, ebe ị ga-anụ mmelite gbasara ọrụ na mkpebi anyị, ma nwee ike isonye na mmemme nsonye ebe anyị na-anụ n'aka ndị enyi anyị na ndị ọzọ metụtara.
Ị ga-enweta ozi, mmemme na nkwalite ọrụ anyị niile na-ebuga ozugbo na igbe mbata gị site na akwụkwọ akụkọ anyị.
Ị ga-enwe ike ịnyefe nzaghachi gị n'aka onye nlekọta aha ya.
Ị ga-enyere anyị aka ịnọ ebe ahụ mgbe ọ dị mkpa maka ndị nwere nkwarụ na ahụike uche na Bromley, Lewisham na Greenwich.
Debanye aha ka ị bụrụ enyi
Iji sonye na atụmatụ ndị enyi BLG Mind, biko họrọ otu n'ime nhọrọ ndị a:
Email anyị nkọwa gị, gụnyere adreesị ozi-e gị, site na 'Email anyị' button n'okpuru, na anyị ga-ezitere gị a enyị n'ụdị nbanye na post.
Budata ma bipụta akwụkwọ enyị, wee tinye ya n'ime nke ọ bụla Ụlọ ọrụ BLG Mind ma ọ bụ zite ya/ biputere ya na adreesị ndị egosiri n'ụdị: budata ụdị.
Were akwụkwọ a siri ike site na nke ọ bụla Ụlọ ọrụ BLG Mind.
Ọ bụrụ n’ịhọrọ ịbụ Enyi nke BLG Mind anyị ga-ejide data ị na-enye na nchekwa. Anyị ga-akpọtụrụ gị naanị maka ebumnuche ekwuru na ngalaba Uru ndị enyi dị n'elu. Maka ozi ndị ọzọ gbasara otu anyị si ejikwa data, biko hụ nke anyị amụma nzuzo.
Email gị (chọrọ)
Adreesị nzi ozi gị (chọrọ)
Nọmba ekwentị gị (chọrọ)